NCP Archives - Halkara News
काठमाडौं । प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कार्बाही गरी नयाँ अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। बबरमहलस्थित कार्की ब्याङक्वेटमा भएको बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको प्रस्तावमा नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको हो। बैठकले पार्टी अध्यक्ष...
ओली भन्छन्- नेकपा अध्यक्षबाट कि म हट्नुपर्छ कि प्रचण्ड ! (सम्बोधन पूर्णपाठ)
कमरेडहरू ! आजको सचिवालय बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। म सबै कमरेडलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले धेरै भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन, बैठक धेरै जटिल मोडमा छ, पार्टी निकै जटिल मोडमा छ। सामान्य अवस्थाबाट पार्टी पनि गुज्रिराखेको छैन, हामी पनि गुज्रिराखेका छैनौँ। एक दुईवटा कुरा राखौँ। अस्तिको बैठकमा केही कुरा जस्त...
१० दिनपछि बस्ने गरी नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित, यस्ता छन् आजका निर्णय
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक १० दिनपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मंसिर १३ गते पुनः बैठक बस्ने निर्णय गरेको नेकपा सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले बताए। आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं प...
नेकपामा पत्र–वारः ओलीको पत्र र त्यसमाथि प्रचण्डको जवाफ
काठमाडौं । २०७४ को तिहारमा सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउँदै नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चुनावमा वाम गठबन्धन निर्माण गर्ने र पार्टी एकता गर्ने सहमति गरे। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको बोल्ड निर्णयले देशको राजनीतिमै ठूलो हलचल ल...
प्रचण्ड प्रस्तावः पार्टी, आन्दोलन र देशको निम्ति ‘ओली प्रवृत्ति’को व्यापक चिरफार गरौं [दस्तावेजको पूर्णपाठ]
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवादको मुख्य कारण र जिम्मेवार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको बताएका छन्। शुक्रबार वालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै प्रचण्डले नेकपामा समस्या उत्पन्न हुनुमा ...
बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक शुरु, कस्तो निर्णय गर्ला आजको बैठकले?
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ। शुक्रबार दिउँसो साढे ४ बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको बैठकमा सचिवालयका सबै सदस्य उपस्थित रहेका छन्। ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले आउन आधा घण्टा ढिला गरेपछि साढे ४ बजेबाट सुरु भएको एक नेताले बताए।...
बैठकका लागि तयार भए ओली, नेकपा सचिवालय बैठक भोलि
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक भोलि शुक्रबार दिउँसो ४ बजे बस्ने बोलाइएको छ। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले दुई अध्यक्षसँगको परामर्शमा शुक्रबार ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बोलाएका हुन्। नेकपामा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प...
प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यले गरे पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउन ओलीसँग लिखित माग
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले पार्टी सचिवालय बैठकका लागि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहमति मागेका छन्। प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्र...
नेकपा गम्भीर संकटमा? किन गरे पार्टी महासचिव पौडेलले नै यस्तो सार्वजनिक अपील
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीको एकीकृत अस्तित्व गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् महासचिव पौडेलले पार्टीको एकीकृत र अविभाज्य अस्तित्वमा गम्भीर संकट देखिएको भन्दै अन्तर्विरोधहरुलाई समाधान गरी पार्टी एकताको रक्षामा लाग्न सबैलाई ...
नेकपा सचिवालय बैठकः संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा संगठनात्मक एकता र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा छलफल भएको छ। मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको बैठकमा संगठनात्मक एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउने विषयमा र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति लगायतका विषयमा छलफल भएको पार्टी प्रवक्ता ना...
पहिरोले दिएको पीडाः म्याग्दीमा ३३ जना बेपत्ता
इञ्जिनियरिङतर्फ स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा मिति तोकियो
१४ पुग्यो नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या, आज रौतहट र कैलालीमा थपिए १/१ जना [भिडियो]